Ekpere maka nkịta na -arịa ọrịa. ? Jiri okwukwe kpee ekpere ma nyere enyi gị aka ịgwọ ọrịa.
Ekpere maka nkịta na-arịa ọrịa. Nkịta ahụ bụ ezigbo enyi mmadụ, n'enweghị mgbagha. Ha na-ewetara ezinulo ọ joyụ na obi ụtọ. Ma, ọ bụ ihe nwute, ọ bụghị ihe niile bụ okooko osisi. Dị ka ihe dị ndụ, ha na-arịa ọrịa, na-achọ nlekọta ma na-akpata nchegbu.
Ekpere maka nkịta na-arịa ọrịa ga-eme ka obi dajụọ gị na ezinụlọ gị n’oge obi nkoropụ. Nkịta gị bụkwa mmụọ nke Chukwu, yabụ agọziri agọzi gị ma ọ bụrụ na iji okwukwe na ntụkwasị obi were rịọ ya.
Ndị a bụ ụfọdụ ekpere ga - enyere obere enyi gị aka ịta ụta ma mee ngwa ngwa.
1 Ekpere maka nkịta na-arịa ọrịa
2 Ekpere maka ịgwọ anụmanụ na-arịa ọrịa
3 Ekpere nchebe
4 Ekpere maka ogwugwo anumanu
5 Ekpere maka nkịta na-arịa ọrịa nke na-agwọ ọrịa
6 Ekpere nke Saint Francis nke Assisi maka ụmụ anụmanụ na-arịa ọrịa.
Ekpere maka nkịta na-arịa ọrịa
“Nna nke Elu-igwe, biko nyere anyị aka n’oge mkpa anyị. I mere anyị ndị nlekọta nke (aha anụ ụlọ). Ọ bụrụ na ọ bụ uche gị, biko weghachite ahụike na ike.
M na-ekpekwa ekpere maka anụmanụ ndị ọzọ nọ ná mkpa. Ka emee ha nlekọta na nkwanye ugwu ruru ihe niile ekere eke ha kwesiri.
Onye agọziri agọzi ka ị bu, Onye-nwe-ayi Chineke, Nsọ bu aha-Gi rue mgbe ebighebi. Amen.
“Ezigbo Onyenwe anyị, ezigbo anụ ụlọ m na onye mụ na ya na-arịa ọrịa na-arịa ọrịa. A na m arịọchitere gị arịrịọ, na-arịọ maka enyemaka gị maka anyị n’oge mkpa.
Eji m obi umeala na-arịọ ya ka ọ dị mma ma bụrụkwa onye ndu maka anụ ụlọ m dị ka o sirila dịrị ụmụ ya niile.
Ka ngọzi gị gwọọ onye mụ hụrụ m n’anya ma nye gị ọtụtụ ụbọchị mara mma anyị ga-anọkọ ọnụ.
Ka anyi gozie anyi ma gwo anyi dika akuku ihe okike gi. Amen!
Ekpere maka ịgwọ anụmanụ na-arịa ọrịa
«Chineke Pụrụ Ime Ihe Niile, onye nyere m onyinye nke ịkọwapụta n'ime ihe niile e kere eke nke eluigwe na ụwa bụ ngosipụta nke ìhè ịhụnanya gị; nke ị nyefere m n'aka, ohu dị umeala nke ịdị mma gị na -enweghị nsọtụ, nche na nchekwa nke ihe e kere eke nke ụwa; kwe ka m, site na aka m na -ezughị okè na nghọta m nwere oke mmadụ, ka m bụrụ ngwa maka ebere Chineke gị dakwasị anụ ọhịa a.
Na site na mmiri m dị mkpa enwere m ike itinye gị na ikuku nke ike, ka ahụhụ gị wee daa wee nweghachi ahụ ike gị.
Mee nke a n’uche Gi, site na nchebe nke ndi mmuo oma ndi gbara m gburugburu. Amen!
“Nye Nna dị obi ebere Nna, onye kere ihe niile dị ndụ n’ime ụwa a, ka ha wee nwee ike ibi ndụ kwem na mmadụ, na onye nche nke mmụọ m, onye na-echebe anụmanụ niile mụ na ha bi n’ụlọ a.
Eji m obi umeala na-arịọ gị ka lelee anya maka ụmụ anụmanụ ndị a na-emeghị ihe ọjọọ, na-ezere ihe ọjọọ ha niile ma kwe ka ha biri n'udo na n'udo ka ha wee jupụta n'ọ andụ na ihu ụbọchị m niile.
Ka nrọ gị bụrụ nke udo ka mmụọ gị duru m gaa n'akụkụ mara mma na udo na ndụ a anyị na -ekerịta.
Ekpere maka ogwugwo anumanu
«Onye isi ndị mmụọ ozi Ariel, onye Chineke nyere onyinye ilekọta anụmanụ niile,
Onye isi ar Raelel, onye natara onyinye nke amara nke ọgwụgwọ, a na m arịọ gị ka ị kọwapụta ugbu a ndụ dị ụtọ a (kwuo aha anụmanụ).
Ka ebere nke Chineke weghachi ike ya, ka o wee nyeghachi m ọ theụ nke ọnụnọ ya na nraranye nke ịhụnanya ya.
Kwe ka m jiri aka m na nghọta pere mpe m, bụrụ ọrụ maka ịhụnanya Chineke iji tinye gị n'ọnọdụ nke ike na-eme ka ike gwụ, ka ahụhụ gị belata na ahụike gị na-adịghachi.
Mee nke a n’uche gi, site na nchebe nke ndi mmuo ndi gbara m gburugburu. Amen.
Ekpere maka nkịta na-arịa ọrịa nke na-agwọ ọrịa
Nna nke Eluigwe, njikọ mmadụ anyị na ndị enyi anyị sitere n'ụdị ndị ọzọ bụ onyinye dị ebube na pụrụ iche sitere n'aka gị. Ugbu a a na m arịọ gị ka ị nye anụmanụ anyị nlekọta nne na nna pụrụ iche na ike ịgwọ ọrịa iji kpochapụ nhụjuanya ọ bụla ha nwere. Nye anyị, ndị enyi gị mmadụ, nghọta ọhụrụ nke ọrụ dịịrị anyị nye ihe okike ndị a.
Ha tukwasiri anyi obi dika anyi tukwasiri gi obi. Mkpụrụ obi anyị na nke ha nọkọrị n’ụwa a iji mepụta ọbụbụenyi, mmetụta na mmetụta na-ekpo ọkụ. Were ekpere n’ezie ma jupụta na ike ma ọ bụ nke na-arịa ọrịa iji nwee ike na ike imeri adịghị ike ọ bụla na-agwọ ya. Nna m ukwu, ekwuputara m mkpa gị (kwuo aha anụ ụlọ).
E jikọtara ịdị mma ya na ihe niile dị ndụ ma amara ya na-erurịrị ihe o kere eke niile. Nke mkpụrụ obi anyị ezigbo ume, na-emetụ onye ọ bụla n’ime anyị aka na ngosipụta nke ịhụnanya ha.
Nye ndị anyị na ha na anụ ụlọ nwere ogologo ndụ siri ike. Nye ha ezigbo mmekọrịta anyị na ya, ọ bụrụ na Onye-nwe ekpebie ịnapụ ha n’aka anyị, ọ na-enyere anyị aka ịghọta na ha anọghịzi anyị, kama ọ bụ naanị nọrọ Jehova nso. Ghanyere anyi n’ekpere maka arịrịọ nke ezi onye nke Francis nke Assisi, onye kwanyere gị ugwu n’ime okike niile. Nye ya ike ile anya ndi enyi anyi n’enwe anwu rue mgbe ha na Onyenwe anyi noro na mgbe ebighi ebi, ebe anyi n’ile anya otu ubochi isonyere ha rue mgbe ebighebi. Amen.
Ekpere nke Saint Francis nke Assisi maka ụmụ anụmanụ na-arịa ọrịa.
“Ebube San Francisco, Nsọ nke mfe, ịhụnanya na ọ .ụ.
N’eluigwe ka ị na-atụgharị uche na-enweghị ngwụcha nke Chineke.
Lebe anyị anya ọma.
Nyere anyị aka na mkpa ime mmụọ na nke anụ ahụ.
Kpee Nna anyị na Onye Okike anyị ekpere ka o nye anyị amara anyị rịọrọ gị, gị onye bụrụla enyi ya.
Meekwa ka obi anyị hụkwuo Chineke na ụmụnna anyị n'anya, karịchaa ndị ọ kacha mkpa.
Ezigbo San Chiquinho m hụrụ n'anya, tinye aka gị na mmụọ ozi a (kwuo aha anụmanụ) chọrọ gị! Mara ima gị, gee ntị n'arịrịọ anyị.
Saint Francis nke Assisi, kpee ekpere maka anyị. Amen.
Ugbu a ịmara ekpere maka nkịta na-arịa ọrịa, mụtakwa ekpere siri ike maka anụmanụ na-arịa ọrịa.
Mụta ekpere nke San Antonio Matchmaker
Ekpere megide ihe ojo